အတိုင်ပင်ခံဆရာတစ်ယောက်နဲ့ လက်တွဲနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းများ – Gentleman Magazine
အတိုငျပငျခံဆရာတဈယောကျနဲ့ လကျတှဲနိုငျဖို့ နညျးလမျးမြား
လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ စတဲ့ ဘယ်နယ်ပယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အကြံပြု လမ်းညွှန်ဆုံးမပေးနိုင်မယ့် ဆရာကောင်းသမားကောင်းရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အတိုင်ပင်ခံ ဆရာကောင်းတစ်ယောက်ရှိထားခြင်းက အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခြေလှမ်းသစ်တွေ စတင်ရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီတော့ ဆရာကောင်းတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုရှာရမလဲ ? ဆရာကောင်းတစ်ယောက်ကို ရှာဖွေဆည်းကပ်နိုင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်း (၅)ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကို အပြည့်အ၀နားလည်ထားပါ။
သင့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို သင်ကိုယ်တိုင်က အပြည့်အ၀နားလည်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ သင့်ကို လမ်းညွှန်ပေးမယ့် ဆရာသမားက မှန်ကန်တဲ့ နည်းစနစ်တွေ၊ အကြံဉာဏ်တွေကို ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ကိုယ်သင် မေးခွန်းတစ်ချို့မေးကြည့်ပါ။ ငါ ဘာတွေ လေ့လာသင်ယူချင်တာလဲ၊ ငါဘယ်နေရာမှာ စိတ်အားတက်ကြွဖို့ လိုနေလဲ၊ စသဖြင့် ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပါ။ သင့်မှာ လိုအပ်နေတာကို ပိုသိလာပြီဆိုရင် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့်သူကို ရှာတွေ့ဖို့ ပိုနီးစပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ သင့်ရဲ့လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းအတွင်းကို သေချာဆန်းစစ်ပါ။
သင့်အနေနဲ့ အမှန်တကယ်လေးစားသမှုရှိပြီး အမြင်ချင်းတူညီတဲ့ လူတွေကို အာရုံစိုက်လေ့လာပါ။ လူချင်း အရမ်း ရင်းနှီးဖို့ အရေးမကြီးပါဘူး။ အတော်အသင့်သိကျွမ်းထားဖို့ပဲ လိုအပ်တာပါ။ သင့်လုပ်ငန်းနဲ့ မတူညီတဲ့ နယ်ပယ်က တစ်ယောက်ယောက်ကိုလည်း အတိုင်ပင်ခံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အပြင်ဖက်မှာ ရှိသူတွေက အဖိုးတန်တဲ့ အမြင်တွေရှိနေတတ်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ သာမန်ဆက်ဆံရေးပဲ တည်ဆောက်ပါ။
အတိုင်ပင်ခံဆရာတစ်ယောက်ကို အလုပ်ချိန်သတ်မှတ်ပြီး ခန့်အပ်ထားတာမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။ သူတို့မှာလည်း သီးခြားလုပ်စရာတွေရှိနေတတ်တာကြောင့် သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း ရာထူးတစ်ခုယူပြီး သင့်ကိုကူညီပေးဖို့ အချိန်မပေးချင်တတ်ကြပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ရဲ့အချိန်ကိုလေးစားတတ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
အတိုင်ပင်ခံဆရာတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ ဆက်သွယ်ဖို့အတွက် နှစ်ဖက်စလုံးအတွက် အဆင်ပြေမယ့် အချိန်တွေကိုပဲ သတ်မှတ်ပါ။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးမှာ လိုအပ်သလို အပြောင်းအလဲလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်း နားလည်ထားပါ။ တကယ်ကို အသင့်တော်ဆုံး အကောင်းဆုံး ဆရာတစ်ယောက်ကို တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ ရေရှည်လက်တွဲထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံသေသတ်မှတ်ချက်မထားပဲ လိုအပ်သလို အတိုင်ပင်ခံဆရာပြောင်းလဲပြီး အကြံဉာဏ်ယူတတ်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ဦးစလုံးအတွက် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ သက်တောင့်သက်သာနဲ့ အဆင်ပြေပြေတွေ့ဆုံနိုင်ဖို့ စီစဉ်ပါ။ အချိန်ကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ တွေ့ဆုံချိန်ကိုလည်း လိုအပ်သလောက်ပဲ သတ်မှတ်ပါ။ အရမ်းကြီး ကြာမနေပါစေနဲ့။ ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေက သင့်ကို ယုံကြည်မှုရှိမှ သင့်ကိစ္စတွေကို စိတ်ဝင်တစား အကြံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အကြံပြုချက်တွေက သင့်အတွက် ဘယ်လောက်ထိအကျိုးရှိစေလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးပါ။
သင့်အနေနဲ့ ထူးချွန်ထက်မြက်ပြီး လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုဟ်တွေကို အတိုင်ပင်ခံဆရာသမားတွေအဖြစ် ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်နိုင်ပြီဆိုရင် သင့်ရဲ့အောင်မြင်တိုးတက်မှုတွေလည်း မြင့်မားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
လူမှုရေး၊ စီးပှားရေး၊ ပညာရေး၊ စတဲ့ ဘယျနယျပယျမှာပဲဖွဈဖွဈ အကွံပွု လမျးညှနျဆုံးမပေးနိုငျမယျ့ ဆရာကောငျးသမားကောငျးရှိဖို့ လိုအပျပါတယျ။ အတိုငျပငျခံ ဆရာကောငျးတဈယောကျရှိထားခွငျးက အခကျအခဲတှနေဲ့ ရငျဆိုငျရတဲ့အခါမှာပဲဖွဈဖွဈ၊ ခွလှေမျးသဈတှေ စတငျရာမှာပဲဖွဈဖွဈ မှနျကနျတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှခေနြိုငျဖို့ အထောကျအကူဖွဈစပေါတယျ။ ဒီတော့ ဆရာကောငျးတဈယောကျကို ဘယျလိုရှာရမလဲ ? ဆရာကောငျးတဈယောကျကို ရှာဖှဆေညျးကပျနိုငျဖို့အတှကျ နညျးလမျး (၅)ခုကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁။ သငျ့ရဲ့ရညျမှနျးခကျြကို အပွညျ့အဝနားလညျထားပါ။
သငျ့ရဲ့ ရညျမှနျးခကျြတှကေို သငျကိုယျတိုငျက အပွညျ့အဝနားလညျထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဒါမှသာ သငျ့ကို လမျးညှနျပေးမယျ့ ဆရာသမားက မှနျကနျတဲ့ နညျးစနဈတှေ၊ အကွံဉာဏျတှကေို ပေးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့ကိုယျသငျ မေးခှနျးတဈခြို့မေးကွညျ့ပါ။ ငါ ဘာတှေ လလေ့ာသငျယူခငျြတာလဲ၊ ငါဘယျနရောမှာ စိတျအားတကျကွှဖို့ လိုနလေဲ၊ စသဖွငျ့ ဆငျခွငျသုံးသပျပါ။ သငျ့မှာ လိုအပျနတောကို ပိုသိလာပွီဆိုရငျ ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျမယျ့သူကို ရှာတှဖေို့ ပိုနီးစပျလာမှာဖွဈပါတယျ။
၂။ သငျ့ရဲ့လူမှုအသိုငျးအဝိုငျးအတှငျးကို သခြောဆနျးစဈပါ။
သငျ့အနနေဲ့ အမှနျတကယျလေးစားသမှုရှိပွီး အမွငျခငျြးတူညီတဲ့ လူတှကေို အာရုံစိုကျလလေ့ာပါ။ လူခငျြး အရမျး ရငျးနှီးဖို့ အရေးမကွီးပါဘူး။ အတျောအသငျ့သိကြှမျးထားဖို့ပဲ လိုအပျတာပါ။ သငျ့လုပျငနျးနဲ့ မတူညီတဲ့ နယျပယျက တဈယောကျယောကျကိုလညျး အတိုငျပငျခံအဖွဈသတျမှတျထားနိုငျပါတယျ။ တဈခါတဈလမှော သကျဆိုငျရာလုပျငနျးနယျပယျအပွငျဖကျမှာ ရှိသူတှကေ အဖိုးတနျတဲ့ အမွငျတှရှေိနတေတျတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။
၃။ သာမနျဆကျဆံရေးပဲ တညျဆောကျပါ။
အတိုငျပငျခံဆရာတဈယောကျကို အလုပျခြိနျသတျမှတျပွီး ခနျ့အပျထားတာမြိုးမလုပျသငျ့ပါဘူး။ သူတို့မှာလညျး သီးခွားလုပျစရာတှရှေိနတေတျတာကွောငျ့ သူတို့ကိုယျတိုငျကလညျး ရာထူးတဈခုယူပွီး သငျ့ကိုကူညီပေးဖို့ အခြိနျမပေးခငျြတတျကွပါဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ သူတို့ရဲ့အခြိနျကိုလေးစားတတျဖို့လညျး လိုအပျပါတယျ။
အတိုငျပငျခံဆရာတဈယောကျနဲ့ တှဆေုံ့ဖို့ ဆကျသှယျဖို့အတှကျ နှဈဖကျစလုံးအတှကျ အဆငျပွမေယျ့ အခြိနျတှကေိုပဲ သတျမှတျပါ။ နှဈဦးနှဈဖကျဆကျဆံရေးမှာ လိုအပျသလို အပွောငျးအလဲလုပျရမယျဆိုတာကိုလညျး နားလညျထားပါ။ တကယျကို အသငျ့တျောဆုံး အကောငျးဆုံး ဆရာတဈယောကျကို တှပွေီ့ဆိုရငျတော့ ရရှေညျလကျတှဲထားရမှာဖွဈပါတယျ။ ပုံသသေတျမှတျခကျြမထားပဲ လိုအပျသလို အတိုငျပငျခံဆရာပွောငျးလဲပွီး အကွံဉာဏျယူတတျမယျဆိုရငျ ပိုပွီးအကြိုးသကျရောကျမှုရှိမှာ ဖွဈပါတယျ။
နှဈဦးစလုံးအတှကျ ဝနျထုပျဝနျပိုးမဖွဈဖို့တော့လိုပါတယျ။ သကျတောငျ့သကျသာနဲ့ အဆငျပွပွေတှေဆေုံ့နိုငျဖို့ စီစဉျပါ။ အခြိနျကိုလေးစားတဲ့အနနေဲ့ တှဆေုံ့ခြိနျကိုလညျး လိုအပျသလောကျပဲ သတျမှတျပါ။ အရမျးကွီး ကွာမနပေါစနေဲ့။ ဆရာကောငျးသမားကောငျးတှကေ သငျ့ကို ယုံကွညျမှုရှိမှ သငျ့ကိစ်စတှကေို စိတျဝငျတစား အကွံပေးမှာဖွဈပါတယျ။ သူတို့ရဲ့အကွံပွုခကျြတှကေ သငျ့အတှကျ ဘယျလောကျထိအကြိုးရှိစလေဲဆိုတာကို ပွောပွပေးပါ။
သငျ့အနနေဲ့ ထူးခြှနျထကျမွကျပွီး လှုံ့ဆျောပေးနိုငျတဲ့ ပုဂ်ဂိုဟျတှကေို အတိုငျပငျခံဆရာသမားတှအေဖွဈ ဆကျဆံရေးတညျဆောကျနိုငျပွီဆိုရငျ သငျ့ရဲ့အောငျမွငျတိုးတကျမှုတှလေညျး မွငျ့မားလာမှာဖွဈပါတယျ။
Previous: သူမ စိတ်မပါရင် ဘာလုပ်ကြမလဲ ?
Next: အတုယူစရာ သန်းကြွယ်သူဌေးတို့၏ အမူအကျင့်(၅)ခု